SamsungZawgyiEnabler_v1.0 - .::just for share::.
Home » android » android apps » android ဖုန်းဆိုင်၇ာ » SamsungZawgyiEnabler_v1.0
နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေရဲ့ မြန်မာစာစနစ်မပါဝင်သေးတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက မြန်မာစာစနစ်
(Myanmar Language) မပါဝင်သေးတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေအတွက်
Samsung Zawgyi Enabler လို့ခေါ်တဲ့ Android ဖုန်းဆော့ဝဲလေး
Android 4.2 နှင့်အထက် မြန်မာစာ (Myanmar Language) မပါဝင်သေးသော Samsung ဖုန်းများကို မြန်မာဘာသာစကား Myanmar Zawgyi ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်းတွင်း setting များအားလုံးတွင် မြန်မာဘာသာစကားပါဝင်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ Samsung Zawgyi Enabler ကိုအသုံးပြုရန် သင့်ဖုန်းအား root လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
Samsung Zawgyi Enabler ကိုအသုံးပြုပြီးပါက
ဖုန်းရဲ့ Setting >Language & input ထဲသို့ဝင်၍ Language တွင် Myanmar (Zawgyi) ကိုရွေးချယ်၍ မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် ဖုန်းတွင်းစနစ်တစ်ခုလုံးကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေရဲ့ မြန်မာစာစနစ်မပါဝင်သေးတဲ့
Samsung ဖုန်းတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက မြန်မာစာစနစ် (Myanmar Language) မပါဝင်သေးတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေအတွက်အခု Samsung Zawgyi Enabler ဆော့ဝဲလေးက အတော်လေးလွယ်ကူအဆင်ပြေသွားစေလိမ့်မယ်ဆိုိရင် ဒီဆော့ဝဲလေးကို ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ။
Samsung Zawgyi Enabler for Android ကို အောက်က link ကနေရယူုနိင်ပါပြီ။ (ကိုသက်နိုင်စိုးရေးထားတာပါ) ကျွန်တော်ကဒေါင်းပြီး ပြန်တင်ပါသည် :D
download >>> mediafire
Laminchit Thawkoko December 7, 2013 at 10:01 PM
Laminchit Thawkoko December 7, 2013 at 10:04 PM
ကို ဖြိုး December 10, 2013 at 3:27 AM
https://www.mediafire.com/?v0hv17xcxmym6g6 အဲ့ဒါလေးကို copy ယူပြိး url bar မှာ paste ချလိုက်ရင်ရပါတယ်ဗျ ကျွန်တော်လင့်မတင်လိုက်မိတာပါ :)